मिठाईले बिगार्ला स्वास्थ्य - स्वास्थ्य - प्रकाशितः कार्तिक ९, २०७६ - नारी
मिठाईले बिगार्ला स्वास्थ्य
चाडपर्वका साथै पूजाआजाका बेला मिठाई तथा सेल रोटीको माग एवं प्रयोग बढी हुन्छ । बजारमा प्रशस्तै मिठाईं पसल देख्न सकिन्छ जहाँ विभिन्न थरीका हेर्दै लोभ लाग्दा, रंगीबिरंगी तथा आकर्षक मिठाईंहरू बेच्न राखिएका हुन्छन् । माग बढी हुने भएकाले नाफाका लागि आवश्यकता पूर्ति गर्न कमसल खालका अर्थात् न्यून गुणस्तरका मिठाईं पनि बजारमा उपलब्ध गराइने वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सन्ध्या कर्माचार्य बताउँछिन् । मिठाईं नभई काम पूर्ण नहुने भएकाले उपभोक्ताहरू बजारमा उपलब्ध मिठाई तथा रोटी किन्न बाध्य हुन्छन् ।
मौकाको फाइदा उठाउँदै मिठाईं पसलेले मिठाईं बनाउन आवश्यक कच्चापदार्थमा उस्तै देखिने अन्य सस्ता तथा न्यून गुणस्तरका खाद्य वस्तु मिसाउन सक्छन् । मिठाईं बनाउन चाहिने कच्चापदार्थ दूध, पनिर, खुवा, चिनी, मैदा, पिठो, बेसन, घिउ–तेल आदिमा मिसावट हुन सक्छ भने मिठाईलाई आकर्षक बनाउन अनेक किसिमका रंग प्रयोग गरिन्छ जुन स्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक हुनसक्छन् ।
डाइटिसियन संगीता लामिछानेका अनुसार कुनै पनि खानेकुरामा बाहिरबाट हेर्दा आकर्षक बनाउन प्रयोग गरिने प्राकृतिक वा कृत्रिम रंग नै खाद्य रंग हो । जस्तो कि हामीले तरकारी बनाउँदा बेसार प्रयोग गर्छौं । यस्ता किसिमका प्राकृतिक रंग स्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक हुँदैनन् । बेसारमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुने भएकाले यसले छालालाई राम्रो बनाउँछ । बेसारमा भिटामिन तथा खनिज प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । यसैगरी केशर पनि स्वास्थ्यका दृष्टिलेलाभदायक मानिन्छ ।
कृत्रिम खाद्य रंग : विभिन्न रासायनिक पदार्थ मिसाएर तयार पारिएको रंगलाई कृत्रिम रंग भनिन्छ । अखाद्य रंगमा भएका रसायनहरूको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ । गर्भवती महिलाले अखाद्य रंग मिसाइएको खानेकुरा धेरै खाए जन्मने बच्चा पुड्को तथा लठेब्रो हुनसक्छ । यसैगरी कसै–कसैलाई अखाद्य रंगले एलर्जी हुन्छ । यस्ता अखाद्य रंगले मिर्गाैलामा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै क्यान्सरसम्म लाग्न सक्छ । नेपालमा कृत्रिम खाद्य रंग मिसाउँदा नेपाल सरकारले तोकेका रंग र रंगको मात्रा (परिमाण) मा रहेर मिसाउन पाइन्छ ।
कस्तो मिठाईं खाने ?
 मिठाईं भरसक घरमै बनाएर खानुपर्छ ।
 घरमा तयार पारिएका मिठाईं स्वास्थ्यका हिसाबले उपयुक्त मानिन्छन् ।
 घरमै सेल रोटी, लालमोहन, रसबरी, खजुरी, अर्सा, अनरसा, फिनी, निम्की, खजुरी आदि तयार गर्न सकिन्छ ।
 मिठाईं चिल्ला तथा गुलिया हुने भएकाले घरमै बनाइएका भए पनि ठिक्क मात्रामा खानुपर्छ । शरीरलाई आवश्यक क्यालोरीअनुसार मिठाईं खानु उपयुक्त हुन्छ ।
 मधुमेह तथा रक्तचापका बिरामीले भने चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम मात्र मिठाईं खानुपर्छ ।
केमा के मिसावट ?
 खुवा तथा छेनामा स्टार्च (पिठो) मिसाइएको हुन्छ ।
 घिउमा वनस्पति घिउ, बोसो तथा डाल्डा ।
बेसन : बेसनमा खेसरीको पिठोको मिसावट तथा अखाद्य रंग मेटानिल एलो (पहेंलो) मिसाइन सक्छ ।
चाँदीको तपक : मिठाईंलाई आकर्षक देखाउन माथिबाट चाँदीको तपक लगाइन्छ । उक्त तपक शुद्ध चाँदीको हुनुपर्छ तर चाँदीको तपक महँगो हुनाले त्यसको सट्टा आल्मुनियमको तपक
वा अखाद्य धातुको वर्क प्रयोग गरिएको हुनसक्छ ।
 मिठाईंलाई आकर्षक देखाउन राखिने चाँदीको लेपमा शुद्ध चाँदीको वर्कको ठाउँमा आल्मुनियम वा अखाद्य धातुको वर्कको प्रयोग ।
साकारिनको प्रयोग : साकारिन चिनीभन्दा धेरै गुलियो हुने भएकाले चिनीको खर्च जोगाउन साकारिन प्रयोग गरिएको हुनसक्छ ।
मिठाईंमा म्याद नाघ्ने मिति स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । बासी, पुरानो बचेखुचेको मिठाईं नयाँ मिठाईंमा मिसाएर प्रयोग गरिएको हुनसक्छ । पुरानो, बासी एवं बिग्रिएको मिठाईंले स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउँछ । यसका साथै मिठाईं बनाउने ठाउँ, बिक्री गर्ने ठाउँ तथा मिठाईं बनाउने मानिसहरूले सरसफाइमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मिसावटयुक्त मिठाईंले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले मिठाईं किन्दा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । ब्रान्ड हेरेर गुणस्तर चिन्ह भएको मिठाईं मात्र किन्नुपर्छ ।